Tag: nurturing | Martech Zone
You're na-efu efu 3 n’ime 5 Sensị na Inye Mmetụta
Fraịde, Ọgọstụ 22, 2014 Tọzdee, Febụwarị 25, 2021 Douglas Karr
M bụ ndị bịara maka a na-adịbeghị anya igba egbe ọzọ nke a ebipụta-na-n'akwụkwọ banyere nri omenala Midwest. Ka m na-agwa ndị otu egwuregwu okwu, enwere nganga dị egwu na ọdịnaya, nka na ngwaahịa a rụchara. Magazin ahụ siri ike ma ị nwere ike ịnwe ụdị akwụkwọ ahụ, na-esi isi ọhụrụ, ma ọ fọrọ nke nta ka ị detụ nri nke akọwara nke ọma na akwụkwọ akụkọ ahụ. O mere ka m bido
Tickle & Woo atụmanya gị!
Tọzdee, Nọvemba 7, 2013 Monday, November 25, 2013 Douglas Karr
Ọtụtụ azụmaahịa azụmaahịa (B2B) usoro ahịa dị ogologo ma sie ike. Ọ bụ nguzozi itinye uche nke uche gị na atụmanya rue mgbe enwere ike ịzụta mkpebi ma ghara ịbupu ha ma chụpụ ha. M na-ele ụfọdụ folks azụlite na-eduga incredibly ọma, na m na-etinye “Adịghị Azịza” na m ekwentị akwụkwọ zere ahịa ndị na-adịghị. Nnyocha na-ekwu na ịchọta ihe atụmanya na-efu $ 443 mgbe ị na-eleta onye na-agba $ 596. Gịnị kpatara
Usoro ahia gị anaghị esochi atụmanya ịzụ ahịa gị. Ọ bụghị naanị na enwere ike ịhazi mkpọsa gị n'oge na-ezighi ezi, enwere ike ọ gaghị ewepụta ya iji nye ozi dị mkpa karịa oge iji mee ka atụmanya bụrụ onye ahịa. Ngwaọrụ ire ngwa ahịa abụrụla ihe ama ama n'ọma ahịa n'ihi na ha na-enye ohere ịzụlite onye ahịa n'oge onye ahịa ya chọrọ ka agwa ya okwu. Ọtụtụ azụmahịa na-ahapụ ohere maka